Izingubo Zezinja Ezincane: Amajazi Warm & Jumpers | Izinja Umhlaba
Izingubo zezinja ezincane azenzelwe kuphela ukwenza izinja zakho zipholile ngokwengeziwe futhi zinemfashini ukwedlula noma ngubani, kepha ziyimphelelisi edingekayo kulezo zimo ezibandayo nakulezo zinja ezincane ezinoboya obuncane noma izinwele ezikahle, eziqaphela kakhulu ubulukhuni bebusika.
Ngalokho, Kulesi sihloko silungiselele ukukhethwa ngezingubo ezinhle kakhulu zezinja ezincaneNgaphezu kwalokho, sizokunikeza amathiphu ambalwa wokuyikhetha, sizosula ukungabaza ngokuthi izilwane zethu ezifuywayo zingalala nayo yini ... Ngaphezu kwalokho, sincoma ukuthi ufunde lesi sihloko esihlobene mayelana izingubo zenja ekwindla.
Izingubo Zejezi Lenja ...
I-SILD - iJacket Jacket ...
I-HuaLiSiJi Jersey Dog ...
I-YAODHAOD Izingubo Zezinja zikakotini...
Ihembe Lenja le-ZDZDY...
Ijazi le-Idepet livunyelwe ...
1 Izingubo ezinhle kakhulu zezinja ezincane
1.1 Ijazi lemvula elifudumele
1.2 Ijacket ekhanyayo yesitayela se-Denim
1.3 Ijazi eligcwele uboya
1.4 Isikibha sikakotini esincane
1.5 Ijezi likaKhisimusi lezinja ezihle kakhulu
1.6 Ijazi elifakwe i-orenji
1.7 Isudi yokugqoka inja
2 Ingabe kuhle ukugqoka izinja?
3 Ngabe inja yami ingalala ngezingubo?
4 Ungazikhetha kanjani izingubo zezinja ezincane
4.1 Izilinganiso zenja yakho
4.2 Uzozigqokelani (futhi kuphi)
4.3 Izingubo AKUFANELE uzigqoke
5 Ungazithenga kuphi izingubo zezinja ezincane
Izingubo ezinhle kakhulu zezinja ezincane
Ijazi lemvula elifudumele
Ijakhethi yezinkanyezi evela e-Amazon yile modeli enamaphiko e-raincoat ezogcina isilwane sakho sifudumele futhi somile phakathi nohambo noma ukuhamba emanzini. Kulula kakhulu ukuyifaka, ngoba inoziphu ngemuva, kufanele ubeke imilenze ngemigodi engaphambili, uvale uziphu futhi yilokho kuphela. Ijazi litholakala ngosayizi nemibala eyahlukahlukene, liyakhanya futhi lihle kakhulu. Qiniseka ukuthi uthatha izilinganiso kahle futhi, uma inja yakho iphakathi kosayizi ababili, khetha enkulu kunazo zonke ukuze uqiniseke ukuthi iyalingana.
Kodwa-ke, inezithiyo ezimbalwa: kubonakala sengathi uziphu ujwayele ukubambeka ezinweleni zezinja ezinoboya obude obuthile. Yini enye, ungawasebenzisi amasongo angemuva njengabanikazi bezintambo njengoba beklebhuka kalula (Kuzofanele wehlise uziphu kancane ukuze ubambe ukuxhuma ihhanisi ngentambo ngaphandle kokuthi ijazi lemvula lingene endleleni).
Ijacket ekhanyayo yesitayela se-Denim
Uma ufuna isikhathi esithile sokuthatha uhambo nenja yakho edolobheni, zimbalwa izinto ozozithola zithandeka kakhulu kunaleli bhantshi elihle lesitayela se-jean. Iboshwe ngezinkinobho ezintathu zohlobo lwensimbi yensimbi ngaphambili futhi inemininingwane yonke eyenzelwe ukwenza inja yakho ibe yinkosi yepaki, kufaka phakathi i-hood yesitayela se-tracksuit. Ngaphezu kwalokho, i-hood nayo iboshwe ngenkinobho ukuze ingaphazamisi inja yakho lapho ihamba.
Ijakhethi itholakala ngosayizi namamodeli ahlukahlukene. Kubaluleke kakhulu ukuthi uthathe ubukhulu benja kahle ukuze ilingane kahle, ingabi nkulu kakhulu noma iqine kakhulu.
Ijazi eligcwele uboya
Vele, inja yakho ibingazukubanda kule jazi elifakwe uboya noma ngabe belisekhoneni elikude kakhulu le-steppe laseSiberia. Ihlala kamnandi futhi intofontofo, ivalwa ngezinkinobho ezintathu zensimbi ngaphambili futhi inokuthungwa okungangeni manzi ngaphandle. Ngaphezu kwalokho, inokuthile okuthakazelisa kakhulu futhi okusebenzisekayo, futhi lokho kubiza ngaphezu kwalokho okubonakala kutholakala kwezinye izingubo: imbobo entanyeni ukuze ikwazi ukubopha ibhande ngayo yonke induduzo engaba khona.
Isikibha sikakotini esincane
Ihembe Lenja laseZunea ...
Isikibha esilula sikakotini uma ufuna ukuvikela umdlwane wakho ngemuva kokushiya umkhwenyana noma selangeni. Yenziwe ngokotini, okwenza iphefumule futhi inethezeke kakhulu. Ngaphezu kwalokho, itholakala nangemibala namasayizi ahlukahlukene. Abanye abasebenzisi bathi ubukhulu, noma kunjalo, kwesinye isikhathi abuhambisani kahle nengubo.
Ijezi likaKhisimusi lezinja ezihle kakhulu
Izilwane ezifuywayo zikaKhisimusi zaseTuopuda ...
UKhisimusi uhlala eza ngaphambi kwesikhathi kunokuba bekulindelwe, ngakho-ke akukubi ukuba neswidi lenja elihambisana nesikhathi esihle kakhulu sonyaka: okubomvu, futhi okunemibala emhlophe. Okudala ngokwedlulele nesitayela akunakwenzeka. Ngaphezu kwalokho, inemininingwane epholile kakhulu, efana nekhola ephezulu nokuqiniswa emilenzeni. Itholakala ngosayizi abahlukahlukeneKodwa-ke, qaphela, ngoba ukuphawula kwabasebenzisi bejuzi kuphawula ukuthi usayizi uvame ukuba mncane.
Ijazi elifakwe i-orenji
I-Idepet Wind Coat ye...
Le modeli iphelele ngokumangazayo, hhayi nje kuphela ijazi elicijile, elenziwe ngendwangu engenamanzi, kodwa futhi inekhanda (okungafakwa izinkinobho ngemuva ukuze kungangeni endleleni) kulula ukuyifaka, njengoba iboshwe ngezinkinobho ezintathu zohlobo lwensimbi yokuqhafaza ngaphambili, futhi inemininingwane ecatshangwe kahle kakhulu. Isibonelo, izimbobo zemilenze ziyaqiniswa, inembobo ngemuva yokudlulisa ibhande futhi ezansi inezintambo ezimbili ezinwebeka ukulungisa ingubo. Itholakala ngosayizi abahlukahlukene.
Isudi yokugqoka inja
Izimpahla Zokugqoka ze-Meioro ...
Y, Yize singesibo abalandeli bokugqokisa izinja zethu uma kungadingekile, bangafuna nokugqoka ezinqeni ukuhambela umcimbi obaluleke kakhulu, njengomshado osepaki. Futhi ukuze ingangqubuzani nezinye izivakashi, i-tuxedo enjengale ngeke ize ipendwe. Lona ugqoke imikhono yehembe ethandekayo nothayi womnsalo ezinhlangothini zombili. Indwangu nayo ithambe kakhulu.
Ingabe kuhle ukugqoka izinja?
Njengakho konke kulokhu kuphila, ayikho impendulo ecacile yokuthi kuhle yini ukugqoka izinja zethu noma cha. Impendulo imvamisa incike kubo, kepha ikakhulukazi kwisimo sezulu esingaphandle: Uma uhlala endaweni ebanda kakhulu, kuwumqondo omuhle ukuthengela inja yakho ijezi ukuze ingabandi.
Khumbula futhi, lokho kunezinja ezidinga ijazi elengeziwe phakathi nezinyanga ezibandayoikakhulukazi uma kunomoya kakhulu noma likhithika. Yimidlwane emincane yokuzalanisa, leyo enengubo enhle kakhulu noma emfushane, noma leyo esanda kufika kumgcini wezinwele, ngokwesibonelo, yileyo ezodinga lolu ungqimba olwengeziwe lwezingubo, hhayi izinja ezinkulu noma ukuthi izinhlanga eziqhamuka ezindaweni ezibandayo, esezivele zinezidingo zazo ngaphezu kokumbozwa.
Yebo, Uma ubona ukuthi inja yakho ayikhululeki, khumula izingubo zakhe khona manjalo. Kwesinye isikhathi akuxhomeki kakhulu ekuthandekeni, noma kubanda kangakanani, kepha ekutheni isilwane sizizwa sikhululeke kanjani uma sigqoke izingubo. Okuza kuqala kithi njalo, ngaso sonke isikhathi kufanele kube yinhlalakahle yesilwane sethu.
Ngabe inja yami ingalala ngezingubo?
Cha, ungalokothi uvumele inja yakho ilale nezingubo ngaphansi kwanoma yiziphi izimoIkakhulukazi uma ukufudumeza kuvuliwe. Ukushisa kakhulu kungenza inja yakho ibe nesikhathi esinzima futhi kuyigulise, ngakho-ke kubalulekile ukuthi ususe zonke izingubo zakhe lapho uvela ekuhambeni kwakho futhi, ngesikhathi sokulala, umshiye ngengubo eyodwa eyodwa ukuze ikwazi ukugoqana ukunambitheka kwakhe.
Ungazikhetha kanjani izingubo zezinja ezincane
Kulesi sigaba ngeke sikunikeze izifundo zemfashini futhi ngeke sikutshele uma umbala obomvana noma oluhlaza muhle kakhulu, kepha sizonamathela kokunye amathiphu asebenzisekayo:
Izilinganiso zenja yakho
Okokuqala, futhi okubaluleke kakhulu, ukukala inja yakho. Landela imiyalo yomthengisi wocezu ukuthola usayizi ofanele, ngoba uma inkulu kakhulu noma incane kakhulu kungangakhululeki ukugqoka, futhi ungagcini ukushisa kahle.
Uzozigqokelani (futhi kuphi)
Enye into enkulu okufanele uyikhumbule yile lapho inja izogqoka khona izingubo zayo, futhi izobhekana nasiphi isimo sezulu. Isibonelo:
Uma uzokwenza ukuna, noma uzohamba ezindaweni ezinamakhaza amaningi nomswakama, okuhle ijakhethi engangeni manzi. Kunoma ikuphi, gwema izingubo zikakotini, ngoba kuthatha isikhathi eside ukoma.
Okwezulu more kubanda, ibhantshi eligwedliwe lizogcina ukushisa kahle kakhulu, noma ijezi elijiyile. Cabanga ngalokho esikushoyo mayelana nomswakama ephuzwini eledlule.
Khetha i- ijezi elincane uma uzoba sekhaya futhi kupholile (ngokwesibonelo, uma ungavuli ukushisa).
Ekugcineni, qaphela ngoboya, njengoba ingaluma futhi ingakhululeki ukugqoka. Uma uzothenga online, kulokhu kusiza kakhulu ukubheka ukuphawula kwamakhasimende.
Izingubo AKUFANELE uzigqoke
Kukhona ezinye izingcezu ezinganconyelwe ngokuphelele izinja (noma, empeleni, nganoma yisiphi isilwane) njengoba zingaba yingozi:
I-Las izikhafu ezinde noma izikhafu Bangakwazi ukugoqa intamo yesilwane sakho bese bayicwilisa.
Kwenzeka okufanayo naku izesekeli, njengemigexo. Ezinye, njengamasongo, amacici, njll., Uma zincane zingagwinywa futhi zingaminza inja yakho empofu.
Ngokunjalo hlola ukuthi izingubo azinazicucu yini (njengamaziphu noma izinkinobho) inja yakho engahle idabule ngephutha igwinye.
Akudingeki ukuthi, izinja zingagqoka amajezi namajazi kuphela, alikho ibhulukwe, noma ngeke bakwazi ukuzikhulula.
Ungazithenga kuphi izingubo zezinja ezincane
Iqiniso yilokho kunamakhulu ezindawo lapho ungathenga khona izingubo zezinja ezincane, abanye bekulindelekile (njenge-Amazon noma izitolo ezikhethekile) nezinye ebesingazilindele nhlobo. Phakathi kokuvamile noma ukwazi ukuthi sithola ini:
Amazon, inkosi yezitolo, enakho konke. Kulesi sitolo esikhulu esiku-inthanethi ngeke uthole kuphela amamodeli amaningi ahlukene, kepha futhi nezintengo eziningi ezahlukahlukene, kusuka kwezishibhile kuya kwezikhethekile. Ngaphezu kwalokho, uma unenketho eyi-Prime, izokuletha ekhaya ngokushesha.
En izitolo zezilwane online like TiendaAnimal and Kiwoko futhi kuvamile ukuthola izingubo zezinja, ikakhulukazi izingubo ezifudumele. Ngaphezu kwalokho, ungenza ukuthengwa ku-inthanethi noma uye esitolo mathupha ukubheka usayizi, uhlobo lwendwangu ... ukuze uqiniseke ukuthi ivumelana nezidingo zakho.
Ekugcineni, samangala ukubona lokho kwezinye izitolo zokugqoka zabantu njenge-H & M banokukhetha okuhle kakhulu kwezingubo zenja. Akungabazeki ukuthi yindawo engalindelekile kakhulu, lapho ungabulala khona izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa uma udinga ucezu lwengubo ngokwakho ... ngenhlanhla encane ongayifanisa!
Izingubo zezinja ezincane kufanele zibe nesizathu sokuba, isibonelo, amakhaza, futhi okokuqala kumele uqiniseke ukuthi inja yakho izokhululeka ukuwugqoka. Sitshele, unayo inja encane obekufanele uyigqoke ngenxa yamakhaza noma ngesinye isizathu? Uyawathanda amajezi noma uthanda amajakhethi? Ingabe kukhona ingubo ekunikeze imiphumela emihle ngokukhethekile?
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Izingubo zezinja ezincane: amajazi afudumele namajezi